Umdlalo - Mytika Speak
Ikhaya / Umdlalo
Impilo. Kuyindaba yokubona. “Nginombono, asidlale umdlalo.” “Muphi umdlalo?” “Sizowubumba.” “Ok ...
Isigaba - Umdlalo